'မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ'မှာ ကျွန်မရဲ့ မင်းသား၊ မင်းသမီးတွေဟာ ထိုက်သင့်တဲ့ အနုပညာကြေးကို မရခဲ့ကြပါဘူ? - Yangon Media Group
‘မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ’မှာ ကျွန်မရဲ့ မင်းသား၊ မင်းသမီးတွေဟာ ထိုက်သင့်တဲ့ အနုပညာကြေးကို မရခဲ့ကြပါဘူ?
မြန်မာ့အလှ၊ယဉ်ကျေးမှု၊ရေမြေသဘာဝအလှများ ထည့်သွင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ ‘မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ရုံတင် ပြသလျက်ရှိရာ ယင်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ရိုက်ကူး ပုံဖော်ခဲ့သည့် ဒါရိုက်တာ ခရစ်(စ)တီးနားခီကို ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီး ရိုက်ကူးပုံဖော်ခဲ့မှုအခြေအနေ၊ အခက်အခဲ၊ အတွေ့အကြုံများနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
‘မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို အချိန်အကြာကြီးစောင့်ပြီးတော့မှ အခုလိုရုံတင်ပြသခွင့်ရပြီဆိုတော့ ဘာများပြောချင်တာမျိုးရှိလဲ။
ကျွန်မကို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ရုံတင်ပြသပေးတဲ့ Junction ရုပ်ရှင်ရုံတွေနဲ့ ရုပ်ရှင်တော်တော်များများကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ တချို့ရုံရှင်တွေကို ကျွန်မ မပြောနိုင်သေးတာကတော့ အခုချိန်ထိ ရုံတင်ပြသရမယ့် ရုံစာရင်း အခုထိ မထွက်သေးလို့ပါ။ ‘မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ’ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ကျွန်မ အရမ်းကို ရုံတင် ချင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ၂ဝ၁၃ မှာ ကျွန်မ ရုပ်ရှင်က စပြီးတော့ရေးပါတယ်။ ၂ဝ၁၃ မှာ ရုပ်ရှင်ကို ကျွန်မကို ယုံယုံကြည်ကြည်အပ်တဲ့ ဦးရဲမင်း(Mona Strassburger)ကို ကျွန်မ အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်မက အဲဒီအချိန်တုန်းက ဘာမှန်းမသိတဲ့ ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်ကို အခုလို ယုံယုံကြည်ကြည် အလုပ်အပ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။ ‘မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ရုံတင်ပြသဖို့အတွက် တန်းစီနေတဲ့အချိန် သုံးနှစ်ကျော်ကြာတဲ့အချိန်မှာ ရုပ်ရှင်ရုံတင်ပြသတဲ့စနစ်က တန်းစီစနစ်က ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အတွက် အခု ရုံတင်ဖို့ကိုလည်း လေးနှစ်ကျော်စောင့်ရပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား စတင်ရိုက်ကူးဖြစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ပြောပြပေးပါဦး။
၂ဝဝ၈ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ ကျွန်မ မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကစပြီးတော့ အခုလို ‘မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ’ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ဖို့အတွက် ကို ငါးနှစ်ကျော်စောင့်ခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်မကို အလုပ်တွေ အများကြီးလာကမ်းလှမ်းကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ မရိုက် ချင်လို့ ငြင်းခဲ့ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ငြင်းခဲ့တာလဲဆိုတော့ ကျွန်မတို့ရုပ်ရှင်မှာ Pre Production နဲ့ Post Production ကို မှန်ကန်တဲ့ လမ်းကြောင်းက မသွားဘူးဆိုရင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကားကောင်းဖို့ဆိုတာ မရှိနိုင်ပါဘူး။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကား မကောင်းဘူးဆိုရင် အဓိက ပြဿနာနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမယ့်သူက ကျွန်မတို့ဒါရိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပဲရိုက်ခဲ့ရရိုက်ခဲ့ရ ပရိသတ်က မသိပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျွန်မ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကားကို မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းကြောင်းကနေ ရိုက်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ငါးနှစ်စောင့်ခဲ့ရပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားရိုက်ကူးဖို့အတွက် ကမ်းလှမ်းတဲ့အချိန်မှာ ဘတ်ဂျက်က အရမ်းနည်းတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဘတ်ဂျက်နည်းနည်းနဲ့ ရိုက်ကူးဖို့ကို ဘာဖြစ်လို့လက်ခံဖြစ်တာလဲ။
‘မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်မှာ ရိုက်ကူးဖို့အတွက် ဇာတ်ညွှန်းရေးပြီးတော့ ၂ဝ၁၄ ဒီလိုအချိန်မှာ စတင်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ ရိုက်ကူးချိန် နှစ်လကျော် သုံးလကြာတဲ့အချိန်မှာ ဘတ်ဂျက် ကုန်သွားပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးရိုက်ကူးဖို့ စကမ်းလှမ်းခံရတဲ့အချိန်က သိန်း ၃ဝဝ နဲ့ စရိုက်ဖို့ ကမ်းလှမ်းခံရပါတယ်။ သိန်း ၃ဝဝ နဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတစ်ကားက မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုတာကို ကျွန်မ သိပါတယ်။ သိသိ ကြီးနဲ့ ကျွန်မ ဒီအလုပ်ကို လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လက်ခံတာလဲဆိုတော့ အရမ်းကိုရိုက်ပြချင်လွန်းလို့ လက်ခံလိုက်တာပါ။
ဘတ်ဂျက်နည်းနည်းနဲ့ ရိုက်ကူးခဲ့ရတာဆိုတော့ အခက်အခဲတွေရှိရင်လည်း ပြောပြပေးပါဦး။
အဲဒီလိုမျိုးလက်ခံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကျွန်မတို့အဖွဲ့က အများကြီးဒုက္ခရောက်ခဲ့ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတာလဲဆိုတော့ ဒီမြန်မာပြည်ဟာ အရမ်းဈေးကြီးတယ်။ ပုဂံတို့၊ ဘာတို့ကဆိုရင် အရမ်းဈေးကြီးတဲ့နေရာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်မတို့ရဲ့ ရိုက်ကူးရေးစရိတ်က ကုန်ကျစရိတ် အရမ်းကိုများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ဘတ်ဂျက်က သိန်း ၃ဝဝ ဖြစ်သွားပြီဆိုကတည်းက ကျွန်မနဲ့ ကျွန်မအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးက မြို့တွေကိုသွားပြီးတော့ စပွန်ဆာ တောင်းပါတယ်။ အဲဒီလိုတောင်းတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မရဲ့ မင်းသားရော၊ မင်းသမီးရောက နာမည်ကြီးမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်က နာမည်ကြီးဒါရိုက်တာမဟုတ်တဲ့အတွက် ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ ရိုက်ကူးခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မတို့က ဘတ်ဂျက်မရှိပေမယ့်လည်း ကွာလတီကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကားကို ဖြစ်ဖို့အတွက်ကို ကိုယ့်အိတ်ကိုယ်စိုက် ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ်စိုက်ပြီးတော့ ကောင်းချင်လို့လုပ်ရတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ မင်းသား၊ မင်းသမီးက ဆိုရင် ထိုက်သင့်တဲ့အနုပညာကြေးကို မရခဲ့ကြပါဘူး။ တချို့သောအဖွဲ့ဝင်တွေဆိုရင် ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ တည်းခိုခဲ့ရတာတွေရှိတဲ့အတွက် ကျွန်မ အရမ်းကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်လေးကို ပရိသတ်က ကြိုက်တယ်၊ အားပေးမှုရတယ်ဆိုရင် ကျွန်မ သူတို့အတွက် တစ်ခုခုပြန်လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်း စဉ်းစားထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အောင်မြင်သည်ဖြစ်စေ၊ မအောင်မြင်သည်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်မကို ကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက် အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အနုပညာအရ ကောင်းပေမယ့် ပြည်သူ့အကျိုး မရှိဘူးဆိုရင် မရိုက်သင့်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ ဒါရိုက်တာ ကြည်
ရှောင်မန်ဒီးစ်ဟာ သူ့အတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိသူလို့ ကမ်မီလာကာဘယ်လိုပြောဆို
မန္တလေးတွင် လမ်းပေါ် လျော့ကျနေသည့် ဓာတ်ကြိုးဖြင့် တိုက်မိရာမှ ဆိုင်ကယ်စီးသူ အမျိုးသားတစ်ဦး သေဆုံး